Inona indray ny hiseho manaraka ? | NewsMada
Inona indray ny hiseho manaraka ?
Firy ny Malagasy mifoha vao maraina, manana fanantenana vaovao ? Misy, saingy ankavitsiana… Ny ankamaroany, efa miatrika izay havoakan’ny anio fotsiny. Miandry sarahina, hoy ny mpampiady akoho izay…
Tsy mbola foana akory, saingy tsy mampatahotra firy intsony izao ny pesta. Efa namoaka fanambarana iny ny avy ao anivon’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena fa efa afaka misokatra avokoa ireo toeram-pilalaovana ary afaka manao fifaninanana amin’izay.
Tsy mbola misy ny fanambarana avy amin’ny governemanta manokatra ny fivoriam-bahoaka izay norarana teo aloha, saingy efa tsy dia misy misento amin’izany intsony. Ny mpianatra rahateo, efa mianatra.
Mihavoafehy ny pesta, saingy mafimafy ny takaitra. Tsy resahana intsony ny aina nafoy tamin’ireo tsy tra-pamonjena. Mbola ao koa ireo tsaboina, na dia tsy hatahorana intsony aza. Tao anatin’ireny fotoana ireny, nisy fihariana maromaro nizaka ny fahavoazana: nofoanana ny hetsika isan-karazany, tsy tonga ny mpizahatany, sns.
Niara-dalana tamin’ny pesta, niafinafina tao ambadika tao ny fidangan’ny vidim-piainana. Niakatra ny solika, niakatra ny vidim-bary sy ny kojakoja fampiasa andavanandro, nisondro-bidy ny hena, sns. Mbola nanampy trotraka anefa ny fidiran’ny mpianatra, izay niverina tamin’ny voalohany: handoavana saram-pianarana ve iny volana tsy nianarana iny?
Raha toa ka kapoka avy amin’Andriamanitra, efa naharary iny resaka pesta iny. Enga anie ka mba ho vita hatreo… Fanantenana arahim-bavaka ihany izany, na dia fantatra aza fa atahorana hatrany ny fotoam-pahavaratra sy ny rivo-doza eto Madagasikara. Mba fanirian’ny rehetra kosa, na mitovy fironana na tsia, ny tsy hisian’ny fahavoazana avy amin’ny olana ara-politika intsony. Na dia mbola sarotra inoana koa aza izany…